Amitaabh Malhotra's Amanqaku kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Amitaabh Malhotra
U-Amitaabh Malhotra ligosa eliyintloko lentengiso le Ewe kunjaloIqonga elidityanisiweyo lokuhlawula, imbuyekezo yokunyaniseka kunye nezibonelelo ezikhuthaza abathengi ukuba basebenzise iifowuni eziphathwayo kuyo yonke imiba yohambo lokuthenga.
Abathengisi banokuthintela njani ilahleko kwindawo yokubonisa
NgoLwesithathu, Julayi 19, 2017 Amitaabh Malhotra
Hamba ezantsi enqanaweni yayo nayiphi na ivenkile enezitena nodaka kwaye amathuba okuba, uya kubona ishopper ngamehlo abo etshixiwe kwifowuni yabo. Basenokuthelekisa amaxabiso kwiAmazon, babuze umhlobo ngesincomo, okanye bajonge ulwazi malunga nemveliso ethile, kodwa akukho mathandabuzo okuba izixhobo eziphathwayo ziye zaba yinxalenye yamava okuthengisa ngokwasemzimbeni. Ngapha koko, ngaphezulu kweepesenti ezingama-90 zabathengi basebenzisa ii-smartphones ngelixa bethenga. Ukunyuka kweselfowuni